देवःको खुद नाफा ३६.१३ प्रतिशतले लाग्यो ओरालो - Everest Dainik - News from Nepal
देवःको खुद नाफा ३६.१३ प्रतिशतले लाग्यो ओरालो
प्रतिशेयर आम्दानीको अवस्था कस्तो छ ?
काठमाडौं, कार्तिक २६ । देवः विकास बैंकले चालु आवको पहिलो त्रैमासमा ३ करोड २३ लाख ७७ हजार रुपैयाँ मात्र खुद नाफा कमाएको छ । गतवर्षको यही त्रैमासको भन्दा नाफा ३६.१३ प्रतिशतले थोरै हो ।
गतवर्ष देवःले ५ करोड ६ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खुद नाफा बुक गरेको थियो । यता, बैंकको खुद ब्याज आम्दानी भने २.९८ प्रतिशतले वृद्धि भएर १२ करोड ६ लाख ५२ हजार रुपैयाँ पुगेको छ ।
गतवर्ष खुद ब्याज आम्दानी ११ करोड ७१ लख ६० हजार रुपैयाँ थियो ।
निक्षेप ७ अर्ब ९६ करोबाट ११ अर्ब ३५ करोड ३० लाख ३६ हजार रुपैयाँ पुर्याएको यस बैंकले १० अर्ब १६ करोड ८९ लाख ७२ हजार रुपैयाँ कर्जा लगानी गरेको छ । चुक्ता पुँजी ६४ प्रतिशतले बढेर १ अर्ब ४४ करोड ४९ लाख ८४ हजार रुपैयाँ पुर्याएको बैंकको जगेडा कोषमा भने ५० करोड ८७ लाख ८४ हजार छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको न्यूनतम चुक्ता पुँजी पुर्याउने अभियानमा रहेको देवःले युनियन फाइनान्स र साझा विकास बैंकलाई एक्वायर गरेर बिहीबार (कात्तिक २३ गते) देखि एकीकृत कारोबार पनि सुरु गरिसकेको छ ।
यस्तै, देवःले सहारा विकास बैंकलाई एक्वायर गर्ने तरखरमा पनि छ । बैंकले प्रथम त्रैमासमा प्रोभिजनमा ४ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँ राखेको छ । देवःले खराब कर्जा भने घटाउँदै लगेको छ ।
गत वर्ष ३.४४ प्रतिशत रहेको खराब कर्जा यो त्रैमाससम्म आइपुग्दा १.७९ प्रतिशतमा झरेको छ । कस्ट अफ फन्ड र निक्षेप अनुपात भने बढेर क्रमशः ८.०६५ र ७६.५३५ पुगेको छ ।
गतवर्ष कस्ट अफ फन्ड र निक्षेप अनुपात क्रमशः ३.९६५ र ७३.८१ प्रतिशत थियो । देवःको ८ रुपैयाँ ९६ पैसा ९वार्षिक० मा झरेको छ । प्रतिसेयर नेटवर्थ भने १३५ रुपैयाँ २१ पैसा छ । गत वर्ष प्रतिसेयर आम्दानी २३ रुपैयाँ १ पैसा र प्रतिसेयर नेटवर्थ १३५ रुपैयाँ ५ पैसा थियो । नेपालीपैसाबाट साभार
ट्याग्स: Banking. share market